တင်မ် ဘာနာလီ - ဝီကီပီးဒီးယား
တင်မ် ဘာနာလီ (အင်္ဂလိပ်: Sir Timothy John Berners-Lee) ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး World Wide Web ကို တီထွင်ခဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို တီထွင်ပေးရန် ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရသည်။ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) စနစ်ကို ပထမဦးဆုံး အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလလယ်တွင် အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် client-server ဆက်သွယ်ရေး စနစ်ကို ပထမဦးဆုံး အောင်မြင်စွာ တီထွင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရက်စွဲ အတိအကျကိုမူ မသိရပေ။</ref>
ဆာ တင်မ် ဘာနာလီ
ဘာနာလိ (၂၀၀၈ ခုနှစ်)
(1955-06-08) ၈ ဇွန်၊ ၁၉၅၅ (အသက် ၆၆)
ကွင်းစ် ကောလိပ်၊ အောက်စဖို့ဒ် (BA)
တင်မ်ကို အင်္ဂလန်၊ လန်ဒန်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ၁၉၅၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၈ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဖခင် ကွန်းဝေး ဘာနာလီနှင့် မိခင် မေရီ လီဝုဒ်တို့၏ သားသမီး လေးဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ့မိဘများသည် ပထမဦးဆုံး လုပ်ငန်းသုံး အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် Ferranti Mark 1 ကွန်ပျူတာဖြင့် အလုပ် လုပ်ခဲ့သူများဖြစ်သည်။
တင်မ်သည် ရှင်းမောင့် မူလတန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လန်ဒန် အနောက်တောင်ပိုင်း လွတ်လပ်သည့် ဧမာနွေလကျောင်းသို့ ပြောင်းကာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အထိ ကျောင်းတက်ခဲ့သည်။ မီးရထားစက်ခေါင်းများကို စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်သဖြင့် မီးရထားဆိုင်ရာ အီလက်ထရောနစ်ပညာများကို ကလေးဘဝကတည်းက စူးစိုက်လေ့လာခဲ့သည်။ အောက်စ်ဖိုဒ် တက္ကသိုလ် လက်အောက်ခံ ကွင်းစ်ကောလိပ်တွင် ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၆ ခုနှစ်အထိ တက်ရောက်ပညာသင်ကြား ခဲ့သည်။ ပထမဘွဲ့အဖြစ် ရူပဗေဒဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဘွဲရပြီးနောက် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Plessey တွင် အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် အလုပ်ဝင်လုပ်သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဒီ ဂျီ နာ့ရှ်နှင့်ပေါင်းပြီး ပရင်တာများအတွက် type-setting ဆော့ဖ်ဝဲကို တီထွင်ခဲ့သည်။
၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ် ဇွန်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ လွတ်လပ်သော ကန်ထရိုက်တာဘဝကို CERN တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သေးသည်။ ထိုကုမ္ပဏီတွင် လုပ်ကိုင်နေစဉ် Hypertext ကို တီထွင်ရန် ကမ်းလှမ်းခြင်းခံရသည်။ သုတေသနလုပ်ကိုင်နေသူများ အချက်အလက်များရရှိနိုင်စေရေးနှင့် ရရှိထားသည့် အချက်အလက်များကို အပြန်အလှန်မျှဝေနိုင်စေရေးအတွက် အထောက် အကူဖြစ်စေနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရေးအတွက် လက်တွေ့ပြသည့် အနေဖြင့် ရှေ့ပြေးစနစ် ENQUIRE ကို တည်ဆောက်ပြခဲ့သည်။
၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် CERN ကုမ္ပဏီမှထွက်လိုက်သည်။ အင်္ဂလန်၊ ဘွန်းမောင့်ရှိICS (Image Computer System) တွင် အလုပ်ဝင် လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာပိုင်းတွင် သုံးနှစ်ခန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူလုပ် ဆောင်ခဲ့သည့် အလုပ်မှာ ကွန်ပျူတာ networking ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် CERN ကုမ္ပဏီသို့ ပြန်ရောက်သွားပြန်သည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် CERN သည် ဥရောပတွင် အင်တာနက်လုပ်ငန်းကို အကြီးကျယ်ဆုံး လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာ သည်။ ဘာနာလီသည် သူတီထွင်ထားသည့် Hypertext ဖြင့် အင်တာနက်တွင် အစွမ်းပြခွင့်ရလာသည်။ သူစိတ်ကူးရခဲ့ သည့် TCP (Transmission Control Protocol) နှင့် Domain name စနစ်များကို အင်တာနက်ဖြင့် တွဲဖက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရာမှ WWW (World Wide Web) ဆိုသည့် အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကြီးသည် အကောင်အထည်ပေါ် လာခဲ့ရပေသည်။ လူတို့အသံဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ စာလုံးများဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့်စနစ်သည် သူအနှစ်နှစ်အလလ ဖန်တီးခဲ့သည့် Hypertext ကြောင့် ပိုပြီးခရီးရောက်ခဲ့ရသည်။
သူယခင် တီထွင်ခဲ့သည့် ENQUIRE စနစ်ကို အခြေခံပြီး WWW ကို တစ်ဆင့်ထပ်တက်နိုင်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်တွင် သိလိုသည်များကို ရှာဖွေနိုင်သည့် Web Browser စနစ်ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က NeXTSTEP ဆိုသည့် OS (operating system) ဖြင့် အင်တာနက်ကို စတင်အသုံးပြုကြရသည်။ ထို့နောက် ပထမဦးဆုံး Web server အဖြစ် လည်း CERN HTTPd ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။
CERN တွင်လုပ်ကိုင်နေစဉ် ပထမဦးဆုံး Website ကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်၌ တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉⁠၉၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင် အွန်လိုင်းပေါ်သို့ပထမဦးဆုံးတင်နိုင်ခဲ့သည်။ CERN ကတီထွင်ထားသည့် NeXT ကွန်ပျူတာတွင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Website နှင့် Web server အဖြစ် Info.cern.ch ဟူ၍ရိုက်ပြီး စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် အင်တာနက်ခေတ်ကို စတင်နိုင်ခဲ့သည်။
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html ဟူသည့် အင်တာနက် address သည် WWW ပရောဂျက်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေရာတွင် အလေးထားရသည့် နေရာတစ်နေရာဖြစ်လာသည်။
ထို Website သို့လာကြည့်သူများသည် Hypertext အကြောင်းကို ကောင်း⁠ကောင်းလေ့လာနိုင်ကြသည်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင် Webpage များကိုလည်း ဖန်တီးတည်ဆောက်ခွင့်ရရှိကြသည်။ သတင်းအချက်အလက်များကို ရှာဖွေဖတ်ရှုလိုလျှင် Web ကိုမည်သို့သုံးရကြောင်းကိုလည်း ထို Site တွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် မိမိတို့ကိုယ်တိုင် Webpage များတည် ဆောက်လိုလျှင်လည်း မည်သို့လုပ်ဆောင်ရကြောင်း ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသေးသည်။
၁၉⁠၉၄ ခုနှစ်တွင် ဘာနာလီသည် MIT သို့ရောက်သွားပြီး W3C ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ W3C ဆိုသည်မှာ World Wide Web Consortium ၏ အတိုကောက်စာလုံးဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများက စံတစ်ခုအနေဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည့် အရည်အသွေး မြင့်သော Web စနစ်ကိုတောင်းဆိုကြသောကြောင့် သူက စံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ရန် W3C ကိုထူထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် စိတ်ကူးကို လွတ်လပ်စွာ အကောင်အထည်ဖော်လိုသူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတီထွင်ခဲ့သည်များကို မူပိုင်ခွင့်လည်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိ၊ မူပိုင်ခွင့်အတွက် ခံစားခွင့်များကိုပါ တောင်းခဲ့သူမဟုတ်ပေ။
ကမ္ဘာ့ကွန်ရက်အဖွဲ့ (W3C) သည် အင်တာနက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး စံအဖြစ် သတ်မှတ်ရာတွင် နည်းပညာအခမဲ့သုံးခွင့်ပြုရမည် ဆိုသည့်အချက်အပေါ်တွင် အခြေခံထားခဲ့သည်။ လူတိုင်း အင်တာနက်ကို အလွယ်တကူသုံးနိုင်ရေးအတွက် ဤသို့သတ်မှတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂ဝ⁠ဝ၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဗြိတိန် ဝန်ကြီးချုပ် ဂေါ်ဒန် ဘရောင်းက ဘာနာလီကို ဗြိတိန်အစိုးရကို အင်တာနက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရပ်များ အဆင်ပြေစေရေးအတွက် အကူအညီပေးနေကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ အစိုးရဌာနတစ်ခုဖြစ်သည့် သတင်းအချက် အလက်နှင့် နည်းပညာအထူးတပ်ဖွဲ့တွင် သူရုံးထိုင်နေသည်။ ဗြိတိန်အစိုးရ၏ Website ဖြစ်သော data.gov.uk တွင် ဘာနာလီနှင့် ပါမောက္ခ နီဂဲလ် ရှက်ဘို့တို့သည် အစိုးရပရောဂျက်ကို အဓိကကိုင်တွယ်ပေးနေသူများဖြစ်လာသည်။
၂ဝ⁠ဝ၉ နိုဝင်ဘာတွင် ဘာနာလီသည် World Wide Web ဖောင်ဒေးရှင်းကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ အင်တာနက် Web ကို အသုံးပြုပြီး ဆက်သွယ်ပေါင်းကူးကာ လူသားအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ထိုဖောင်ဒေးရှင်းကို ထူထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဘာနာလီသည် အင်တာနက်တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများကို စောင့်မကြည့်ရေး၊ လွတ်လပ်စွာလေ့လာခွင့်ရရေး၊ အင်တာနက် ထိန်းချုပ်မှုကင်းရေးတို့အတွက်လည်း လှုပ်ရှားဖော်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူက Net Neutrality ဆိုသည့်သဘောတရားကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်ကို လူ့အခွင့် အရေးတစ်ရပ်အနေဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “ကုမ္ပဏီများ၊ အစိုးရများအနေဖြင့် အင်တာနက်လမ်းကြောင်းကို အမျိုးမျိုးဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ခိုးကြည့်ခြင်းတို့သည် အင်တာနက်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလူသားကွန်ရက်အခွင့် အရေးကို ချိုးဖောက်ရာရောက်သည်” ဟုသူကပြောဆိုခဲ့သည်။
၂ဝ⁠ဝ၄ ခုနှစ်တွင် ဘာနာလီကို လူသားအကျိုးပြု တီထွင်ခဲ့မှုဖြင့် ဒုတိယမြောက် အဲလိဇဘက် ဘုရင်မကြီးက သူရဲကောင်းဘွဲ့ (Knight) ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၂ဝ⁠ဝ၉ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားအကယ်ဒမီသိပ္ပံက သူ့ကို ဂုဏ်ထူးဆောင် ဘွဲ့ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် နွေရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားတွင် World Wide Web ကိုတီထွင်သူတစ်ယောက် အနေဖြင့် ဂုဏ်ပြုတက်ရောက်စေခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် အဲလိဇဘက်ဘုရင်မကြီးက ပေးအပ်သည့်ဆုကို အင်တာနက် တီထွင် သူ ငါးဦးအနက်မှ တစ်ဦးအဖြစ်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။
↑ BERNERS-LEE, Sir Timothy (John)။ ukwhoswho.com။ Who's Who။ 2015 (online Oxford University Press ed.)။ A & C Black, an imprint of Bloomsbury Publishing plc။ (အသင်းဝင်ရန် လိုအပ်သည်။)
↑ MIT Center for Collective Intelligence (homepage)။ Cci.mit.edu။ 15 August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ MIT Center for Collective Intelligence (people)။ Cci.mit.edu။ 15 August 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Berners-Lee၊ Tim; Mark Fischetti (1999)။ Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World Wide Web by its inventor။ Britain: Orion Business။ ISBN 0-7528-2090-7။
↑ "Long Live the Web" (2010). Scientific American 303 (6): 80–85. doi:10.1038/scientificamerican1210-80. PMID 21141362.
↑ "Web science emerges" (2008). Scientific American 299 (4): 76–81. doi:10.1038/scientificamerican1008-76. PMID 18847088.
↑ "Computer Science: Enhanced: CreatingaScience of the Web" (2006). Science 313 (5788): 769–771. doi:10.1126/science.1126902. PMID 16902115.
↑ Berners-Lee Longer Biography။ World Wide Web Consortium။ 18 January 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တင်မ်_ဘာနာလီ&oldid=716256" မှ ရယူရန်
၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။